Ny Fahafatesana Manirerin’Ilay Lehilahy Anisan’ny Fanta-Bahoaka Indrindra Ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2017 6:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Türkçe, Français, عربي, Español, English
Fandaharan'ny ESAT Manokana momba an'i Assefa Chabo tamin'ny 25 Aprily 2017. Pikantsary tao amin'ny fandaharana nozarain'ny fantsona Youtube ofisialin'ny Fahitalavitra ESAT .
Maty tamin'ny 23 Aprily tany an-tsesitany teo amin'ny faha 73 taonany i Assefa Chabo, mpanoratra izay nanamarika ny taratra hazavan'ny hetsika ara-politika Ethiopiana nandritra ny taompolo 1970 sy ny famoretana taorian'izany.
Niaina tao anatin'ny fiainam-bahoaka i Assefa kanefa niaina izany samirery izy. Nilaza ny iray tamin'ireo namany fa niresaka taminy farany an-telefaonina izy tokony ho tapa-bolana lasa izay. Tamin'ny 20 Aprily, nilaza tamin'ireo namana i Birtukan Mideksa, mpanao politika Ethiopiana natao sesitany sady olom-pantany fa efa elaela izy izay tsy niantso azy. Sady tsy namaly rahateo izy rehefa nantsoina tamin'ny findainy .
Tamin'ny 3 Aprily ny lahatsoratra navoakany farany tao amin'ny pejiny Facebook izay hanoratany matetika ny fanehoan-keviny.
Tsy nitsahatra niantso an'i Atoa Assefa i Birtukan rehefa niahiahy momba ny fitsaharan'ny fanoratany mahazatra. Naneno hatrany tsy nisy namaly anefa ny finday. Nanohy ny antsony tao anatin'ny ahiahy izy, mandra-pahandrenesany valiny mahakivy avy tamin'ny mpanampy mpitsabo nanatrika azy, ary nilaza taminy fa ao amin'ny sampana fameloman'aina ao amin'ny hopitaly Parkland ao Dallas, Texas izy. Voalaza fa nandeha tany amin'ny hopitaly mba ho zahana noho ny antony tsy voafaritra izy.
Nambaran'ny namany Yared Tibebu tao amin'ny Facebook ny fahafatesany.
Nahavita fianarana tao amin'ny Oniversiten'i Addis Ababa i Assefa. Nohajaina fatratra izy teo anivon'ireo mpiara-belona aminy amin'ny maha mpanoratra sady mpikambana azy tao amin'ny taranaky ny revolisionera Ethiopiana tamin'ny taona 1960 izay nanomboka ny adim-panafahana miady amin'ny famoretana ara-politika.
Nandritra ny fitondrana jadona miaramilan'i Mengistu Hailemariam tamin'ny taompolo 1980, nahatonga azy ho gadra politika nisedra fampahoriana nandritra ny 12 taona tany an-tranomaizin'i Addis Ababa ny asa sorany .
Tamin'ny taona 1991, nafahana tany am-ponja izy rehefa nandresy tamin'ny ady an-trano ny fitondrana ara-politika ankehitriny. Nitondra vetivety vonjimaika tao amin'ny governemanta Ethiopiana izy rehefa afaka izany, kanefa nirodana vetivety ny fifandraisany tamin'ny mpihazona fahefana vaovao. Tamin'ny taona 1993, nandao an'i Ethiopia tanteraka izy, ary nipetraka nandritra ny roapolo taona mahery tany Etazonia .
Mpisolovava nankasitrahana ihany koa i Assefa, manan-janaka efatra ary nanana tsindrimandry ara-politika sy asa soratra nanome aingam-panahy ireo tanora indray mihira. Na izany aza, niafara tamin'ny fijaliana irery tany an-tsesitany matroka ny fiainany.
Niteraka aingam-panahin'ny hafatra fiaraha-miory feno fanajana tao anatin'ny vondrom-piarahamonina Ethiopiana any am-pielezana ny fahafatesany, kanefa tsy izy irery no voalohany tamin'ny mpanoratra Ethiopiana maty tany an-tsesitany.
Fonon'ny bokin'i Assefa
Hatramin'ny nisian'ny revolisiona Ethiopiana tamin'ny taona 1974, Ethiopiana malaza marobe izay nanolo-tena ny hanompo ny vahoaka no maty tany an-tsesitany. Maty tamin'ny taona 2006 ny poeta lehibe , mpandika teny sady mpanoratra tantara Tsegaye Gebre-Medhin rehefa nifindra tany New York avy any Ethiopia tamin'ny taona 1998. Maty tany Lawton, Oklahoma i Gebre Kristos Desta izay nofaritana ho rain'ny zavakanto maoderina Ethiopiana .
Voatery nandao ny firenena izy tamin'ny taona 1978, tany Kenya aloha, avy eo tany Alemaina, ary farany tany Etazonia izay nahazoany fialokalofana kanefa maty izy taty aoriana tamin'ny taona 1981.
Maty raha mbola nipetraka tany an-tsesitany, tao Washington DC tamin'ny taona 2015 i Mulgeta Lule , olo-malaza indrindra teo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety Ethiopiana. Niafara toy izany ihany koa i Tesfaye Lemma, izay tsy hiadian-kevitra fa ilay mpihira lehibe indrindra tao Ethiopia voatery nandeha an-tsesintany tany Etazonia ary nanangana ny foibe ara-kolontsaina Ethiopiana tao DC talohan'ny nahafatesany .
Ohatra vitsivitsy ihany ireo, fa mbola misy Ethiopiana maro hafa izay resy teo amin'ny lafiny ady ara-politika tao amin'ny firenena no terena hipetraka sy ho faty tany an-tsesitany.
Nandray andraikitra lehibe nandritra sy taorian'ny hetsiky ny mpianatra Ethiopiana tamin'ny taompolo 1970 i Assefa ; tsy tamin'ny alalan'ny asa sorany ihany, fa tamin'ny alalan'ny fikarakarana vondrona ara-politika isankarazany ihany koa. Niaina tao anatin'ny fiainana samirery izy rehefa voatery niala tany Ethiopia, kanefa nifandray tsy tapaka tamin'ny gazety tao amin'ny firenena. Nanoratra momba ilay nantsoiny hoe “Ethiopia -Ny Tanindrazana Iraisantsika ” izy niaraka tamin'ny faniriana fatratra tao amin'ilay mpanoratra tapaka fifandraisana tamin'ny tanindrazany.
Nalaina tao amin'ny fantsona YouTube-n'ny Addis Vision
Namoaka ny tsiarony izy tamin'ny taona 2016. Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny governemanta Ethiopiana izy ary namory ny mpanohana azy tao amin'ny Facebook nandritra ny hetsi-panoherana vao haingana tao Ethiopia.
Nilaza ny naman'i Assefa fa naniry hatrany ny mba hiverina tany an-tanindrazan'ny fahazazany tany Chencha izy, tanànakely iray any amin'ny faritra atsimon'i Ethiopia izany. Nanokatra ny pejy gofund me ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina any am-pielezana Ethiopiana any amin'ny faritra Dallas sy ireo namany izay nandre ny fahalasanany mba hanatanterahana ny faniriany. Nitobaka ny fanohanana mba hampodiana ny nofo mangatsiakany ho any amin'ny tany hitsaharany farany.